Baarentuu Gadaa Irraa, Adoolessa 2, 2018
Adoolessa 2, 2018: Magaalaan Naqamtee marfata 1ffaa ykn marfata Abdiisaa Aagaa irratti sa’a ammaa kana sa’a 7:00 irratti faaruu
Itiyoophiyaan biyya fedhii uummattootaa malee humna waraanaatin ijaaramteedha. Habashanni kaaba impaayeerettii turan qawwee gargaarsan argatan qabatanii gama kibbaatti duuluun uummattoota har’a
impaayerittii keessa jiran addatti ammoo saba Oromoo qayee fi qabeenyarraa buqqisaa turan.Ajjeechaa dabalatee saamicha gaggeessaa turaniin Oromoo hiyyoomsaas turan. Qayee fi qabeenya isaatti abbaa ta’an. Kunoo akkuma muldhachaa jiru waggoota 150n darbaniif itti walfuraa yakkoota danuu Oromoo fi saboota hedduu Impaayerittii keessa jiran irratti raawwachaa jiru. Keessumaa Oromoo diina innikaa godhatanii qayee fi qabeenya isaarratti gabroonfachuun amma wayyaanee har’aatti wanti raawwachaa jiran sukanneessadha.
Akkuma hunduu quba qabuu fi beekutti seenaa mootummoota Impaayeera Itiyoophiyaa keessatti amma wayyaanee har’aatti tokkichi isaanituu filannoo ummataatin aangootti hin dhufne. Shiraan, ajjeechaan , ukkaamsaa fi dararaan aangoo qabachaa turan, ittis jiru. Inni har’a Ministeera muummee haaraa Itiyoophiyaa jedhamee hololamaa jiruuf DR.Abiyyi Ahimadis akkuma bulochitoota Itiyoophiyaa duraanii shira uummataa fi walirratti hojjechaa jiraniin aangotti dhufe malee Ummata Oromoos ta’e sabni kamuu, sabaa mitii namni dhuunfaan kamuu isa hin filanne, ykn bakka isa hin buufanne. Egaa isan har’aas ta’e warri durii kanneen shiraa fi afaan qawweetiin aangoo qabatan kunneen aangoo humnaan qabatan kanatti fayyadamanii yakka, shira hojjeechaa turan. Hojjechaas jiru.Keessuma wayyaaneen gaaraa amma dakaatti aangoo biyyattii dhuunfachuun waraanaa, tikaa, fi daldalaa kaasee amma hojii siviliitti shirri, yakkii fi saamichii raawwachaa ture amma hin qabu.
Waggoota 27n darban keessa addatti ammoo waggoota 4n darban keessa Oromoon ilmaan isaa ABO/WBO/Qeerroo waliin ta’ee qabsoo hadhooftuu gaggeessaa jiruun injifannoo irratti ijifannoo galmeessaa jira.
Injifannoon kunis har’a dirree bahee Oromoo mitii saboota cunqurfamoo impaayeerittii kaanifuu fakkeenya ta’eera.
Yeroo ammaa kana WBO/Qeerroon diina waggaa 150 oliif uumata Oromoo irratti daadee baase akka deebi’ee hin suphamnetti unkuteessee jira.
Mootummaan TPLF/EPRDF afaaniin jira jedhee haa hololu malee hin jiru, burkutaayee jira. Mootummaan shiftaa fi faashistiin waggoota 27n darbaniif akka farda fuuloo hin qabnee biyyattiirra garmaamaa ture kun har’a qabsoo Oromootin dhiibamee qarqara qilee gaheera. Irreen isaa ajjeechaa, hidhaa fi dararaaf duubatti hin jenne rukutameera.
Kan hafes rukutamaa jira. Har’a Oromoon galma qabsoo isaa bira gahuuf daandiin isa hafe muraasa.
Gaafiin Oromoo, kan wareegamaafii ture akka waan bulchiinsa gaarii, kanneen hidhaman gadi naaf lakkisaa ta’ee fi wayyaanuma jalatti bulchiinsa gaarii nuuf diriirsaa ta’eetti OPDO bobbaasee hololchiisaa jira. OPDOn akka waan Oromoon mirga abbaa biyyummaa gaafataa hin jirreetti waayee Itiyoophiyummaa afarsaa jirti. Gaafin Oromoo mirga abbaa biyyummaa, hiree ofii ofiin murteeffachuudha. Oromoon Itiyoophiyaan jiraachuu hin qabdu jedhee qabsaawee hin beeku.
Jiraachuu dhiisuun dhimma ishiiti. Oromoon osoo mirga hiree murteeffanaa, ofiin of bulchuu jedhee falamuu, osoo mirga abbaa biyyummaaf qabsaawaa jiruu OPDOn feedaraala fakkeessii sanuu diigdee tokkummaa, tokkummaa itiyoophiyaa jettee hololuun garuu diinummaa isiin uummata Oromoof qabdu kan caalaatti mirkaneessaa jiruu dha. OPDOn akka sabaatti ijaaramuun, ofiin of bulchuuf, gabrummaa
jalaa of baasuuf qabsaawun faashina yeroon itti darbe jettee hola ifatti qabsoo uummata oromoo balaaleeffachaa jirti. Akka muldhachaa jirutti sirna bara minilik Oromoo irratti ijaaramee waggoota 150 ol addatti baraoota 27n darban uummata Oromoo miidhaa ture ammas irra tursiisuuf carraaqxi.
Tattaafatti, kanaaf ragaa guddaan ammoo alaabaa fi dhaadannoo Waxabajjii 16 bara 2018 sirna deeggarsa Dr Abiyyi Ahimad jedhamee bahamerratti nafaxanyootaan qabatamee bahameedha. Alaabaa miniliki, Afaan tokko,Aaadaa tokko kan jedhu ifatti callaqqisaa oole. Abiyyis Itiyoophiyaa faarsaa oole.
Previous articleSimbirtuu Radio 28 06 2018
Next articleAddis Standard Interviews Mike Raynor, US Ambassador to Ethiopia